“Khilaafkii UCID Muu Dhamaanine Wuxuu isku Badali doonaa Halgan” Jamaal A Xuseen | Berberanews.com
Home WARARKA “Khilaafkii UCID Muu Dhamaanine Wuxuu isku Badali doonaa Halgan” Jamaal A Xuseen
“Khilaafkii UCID Muu Dhamaanine Wuxuu isku Badali doonaa Halgan” Jamaal A Xuseen
Hargeysa (RM) Musharraxa Rasmiga ah ee Xisbiga Ucid Md. Jamal Cali Xuseen ayaa soo saaray qoraal dhinacyo badan taabanaya oo u kaga hadlay dagaalkii Siyaasadeed ee Cir iyo dhulka ahaa ee lagu qaaday. Waxanu sheegay inaanu weli dhamaan khilaafka Ucid, sidoo kalena waxa tilmaamay hoggaamiyaashii lagu dhibaateeyey halgankii madaxtimi ee aduunka soo maray, kuwasoo uu tusaalayaal usoo qaatay Madaxweynihii hore ee Somaliland Marxuum Maxamed X Ibraahin Cigaal iyo sidoo kale Nelson Mandela Waxanu qoraal uu soo saaray ku yidhi sidan.
“Horta mahad Ilaahay baa leh, ka dibna dadkii xaqa igu taageeray waxaan ku leeyahay Ilaahay kheyr haydin siiyo. Horta kulankii Khamiista ee xarunta xisbigga horteeda dib baanu u dhignay oo wax ka weyn baanu diyaarin doonaa inshallah ee sidaasi ula socda oo berito oo khamiis ah ma jiro kulankii aanu hore ugu baaqnay dadweynaha iyo taageerayaashaba;
Adduunyaddu Sidaa kuma gudhee, subaxba waa cayne,
Ninkastoo Salaan dheer u baxa, siibashoow xigiye,
Suldaaro waaw halis ninkay, rag isa seegaane
Gabaygii Seben ee Qaasim IHUN
Khilaafkii UCID Muu Dhamaanine Wuxuu isku Badali doonaa Halgan lala galo cidkastoo ka danbeysay. Walee ninka nin ragga waxba iskaga tirin waayaa, maalin danbe ayuu heli natiijadeedda. Halgankii weli igamuu dhamaanin, Anigana niyadaydii waxba iskamay badalin. Adduunkana hogaamiyayaashii soo maray qaarbaaba jeel in badan u galay in ay dalkooda isbadel ka sameeyaan. Nelson Mandela 23 sanadood buu xidhnaa; kuwii xidhay baanu madaxweyne u noqday. Madaxweyne Cigaal Ilaahay haw naxariistee 12 sanadood buu isaguna xabsiga ku jiray, markii danbena sharaf iyo cisi ayaa lagu aasay, halka ninkii xidhay oo Siyaad Barre ahaa uu qol keliya oo Nigeria ku yaala uu ku geeriyooday Ilaahay haw naxariistee isagoo beryaha qaar heeso badan loo qaadi jiray. Kuwa UCID maanta burburinaaya iyo kuwii UDUB naga burburiyeyba kol haddii sharciyaddii dalka loo afduubay in aanu Jamaal Cali Xuseen murashax noqon, waxaanay meesha sooba gelin tii Ilaahay iyo ta dadku ay doonayaan. Kolay calfan maayaan dhamaan inta Ilaahay hortii been qaawan iyo dulmi la hor istaagtay iyo inta ku taageertay iyagoo og in ay qalad tahay. Dagaalku imikaabu bilow yahay ragna yaryaraysi ma laha; Ilaahay iyo dadkana waan isku haleeynayaa. Waxaan ku faraxsanahay in aanu godkii ka soo saarnay intii dulmiga dabadda ka waday; wax badana ummadda waanu u iftiimin doonaa. Inaga waxaa inaga go’an in aynu dalkeena badbaadino. Khasab maaha inuu Jamaal Cali Xuseen madaxweyne noqdo; laakiin sifaha loo marayo haday qaldan yihiin in waa shay sugaaya inaga iyo ubadkeenaba in aynaan ku daawanin daalamiinta. Maanta haddii TV yada lagaga faanayo khiyaamo oo kuwii aynu xukunka u dhiibanay ay iyagiina ugu sacab tumayaan. Waar anigu dulmi ogolaan maayo, ee sidaa ha laygu ogaado. Dakanayda cidda qabtana waan garanayaa oo Ilaahay baan ku xawilay.
Dhamaan Taageerayaasha iyo Dadka Cadaaladda Jecel ee Somaliland waxaan u sheegayaa in halgankii aynu doonaynay in aynu dalkeena jihadda saxa ah u horseedno aanu dhamaan oo aanay niyad jabin markay arkaan sida waalida ah ee ay cadaaladdii iyo dimuqraadiyaddii dalku u shaqaynayso. Inshallah aynu sideenii iskugu duubnaano; waanan idinla socodsiin doonaa talaabooyinka aynu qaadi doona. Hantidda ugu weyn ee xisbiyaddu waa taageeradda dadka. Marnaba ka ogolaan mayno in cadaalad daro ay dalkan ka dhacdo, ummaddana marwalba saaqid siyaasadeed soo hor-joogsan maayo; Waanu idinla soo socodsiin doonaa. kUN JEER BAAN U MAHADINAYAA DADKII I TAAGEERAY EE XAQA TAAGEERAY”.
Qalinkii Musharrax Jamal Cali Xuseen
Previous articleJilaaga caanka ku ah Aflaamta Hindiga Aditya Pancholi (Indha-cadde) oo maxkamadi xukuntay
Next articleGanacsade Adaa Abaarta Keenay